अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरुले कति कमाउँछन् ? - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरुले कति कमाउँछन् ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १७ पुष २०७५, मंगलवार ०४:२६ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरुलाई काम गर्ने अनुमती हुन्छ । यहाँ विद्यार्थीहरुले पन्ध्र दिनमा चालिस घण्टा काम गर्ने अनुमति पाउँछन् । युनिभर्सिटीको बिदाको समयमा उनीहरुले फुल टाईम काम गर्न पाउँछन् ।
नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीहरुले यहाँ आउनु अगाडी नै आफ्नो कमाइको हिसाबकिताब गर्न थाल्छन् । घरपरिवार तथा आफन्तले पनि उसले काम गर्ने घण्टा, डलरको भाउ आदिको आधारमा उसले यहाँ आएपछि कति कमाउँछ भन्ने हिसाबकिताब गरिसकेका हुन्छन् । केहीले त त्यो कमाइ अनुसारको आफ्नो लागि कोशेली पनि डिमाण्ड गरिसक्छन् ।
यसै प्रसङ्गमा हाल मेलबर्नमा रहेर आइटि पढ्दै गरेका हेटौडाका रेमन भण्डारी भन्छन् ,” अष्ट्रेलियाको लागि मेरो भिसा लागेपछि मेरो घरको माहोल पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भएको थियो । आफ्ना सपना संगै मैले पनि मनले डलरलाई रुपैयाँमा साट्दै अष्ट्रेलियाको लागि भिसा हातमा लिएको थिएँ । तर, मनले गरेको हिसाबकिताब जस्तो कहाँ सजिलो हुन्छ र वास्तविकता ? अष्ट्रेलिया आएपछि नेपाल देखि नै चिनेका साथीहरुसंग बसें र काम खोज्न सुरु भयो । सुरुमा काम खोज्ने ठाउँ भनेका क्लिनिङ्ग, किचन रहेछन् । नेपालमा आफ्नो थाल नउठाउने मैले डलरको लागि ती काम गर्न पछि हटीन । पछि हटेर पो के गर्नु ? कसले पाल्छ ? अनि, कमाइ ? घण्टाको हिसाबले मरी-मरी काम गर्यो । अनि कमाइको हिसाब गर्दा त युनिभर्सिटीको फी तिर्नको लागि मात्र । मोबाइल बिल, गाडी भाडा, कोठा भाडा, खान खर्च ती सबै हिसाब गरेर घण्टाहरु बढाउँदै जानुपर्यो । नेपालबाट साथीहरुको आइफोनको डिमाण्ड आइसक्यो, आफूले आएको ऋण सम्म कसरि तिर्ने भन्ने तनावमा घण्टा र डलर गन्दैछु । ”
अष्ट्रेलियामा पैसाको बोट छैन । यहाँ कामको सम्मान हुन्छ र त्यही कामको आधारमा घण्टा गन्दै केही डलर लिने हो । यहाँ आएका विद्यार्थीले आफ्नो परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न चाहन्छन् । तर, बाध्यतावश उनीहरु परिवारले आशा गरे अनुरुप सहयोग गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । विद्यार्थीले यहाँ कडा मिहिनेत गरेर एक हप्तामा सात सय डलर कमाउँछ । तर, उसको खर्चको हिसाब पनि डलरमै हुन्छ । घरभाडा, यातायात खर्च, मोबाइल बिल सबै यहाँ महँगो हुन्छ । र, त्यो कमाइबाट उसले युनिभर्सिटीको शुल्कको लागि पनि बचत गर्नुपर्ने हुन्छ । कमाइले युनिभर्सिटीको शुल्क तिर्न नपुगेका कारण कतिपय विद्यार्थीले आफ्नो विषय नै परिवर्तन पनि गर्छन् ।
कामलाई प्राथमिकतामा राखेर कडा मिहिनेत गर्ने विद्यार्थीले अष्ट्रेलियामा एक हप्ताको एक हजार डलर भन्दा माथी पनि कमाउँछन् । तर, धेरै जसो अवस्थामा कामलाई प्राथमिकता दिंदा नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउनुको उद्धेश्य र सपना नै मोडिन्छ । पढाइको लागि विद्यार्थी जुन सपना लिएर आएको हुन्छ, त्यो पूरा हुन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ ।
अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीले नेपालबाट नै यहाँको संघर्षलाई बुझेर आउनुपर्छ । यसको साथै विद्यार्थी स्वयम् र परिवारले डलरलाई भन्दा बढी यहाँ आउनुको मूख्य उद्देश्यलाई महत्व दिनुपर्छ । अष्ट्रेलियामा पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि करियरमा सफलता हासिल गर्न सक्छ । यहीं पनि प्रशस्त अवसरहरु खुल्छन् । त्यसैले आजको डलरको हिसाबकिताबलाई भन्दा बढी भोलीको भविष्यलाई सम्झेर अष्ट्रेलियालाई आफ्नो शैक्षिक गन्तव्य बनाउनु उचित हुन्छ ।
Previousवैशाखदेखि उपत्यकामा ३ सय बिजुली बस सञ्चालन हुने
Nextबलिउड अभिनेता कादर खानको ८१ वर्षको उमेरमा निधन
फागुनमा ८ मा निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
४ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०१:२२
सुन काण्ड : गोरेको बयानले थप रहस्य खुल्दै
१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०२:३५
२ भाद्र २०७६, सोमबार ०८:०२